Fifaliana sy fiadanana
Iza izahay ?
Ny GBPE ?
Handray Mana isan'andro !
Tokony hanao jerika todika foana isika mba ahafahantsika mandroso, tena sarotra ny mijery tena, mahafantatra hoe aiza ho aiza tokoa no misy antsika amin’izao fotoana izao.
“Ary hoy ny anjely taminy: Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an’ ny olona rehetra. Voninahitra any amin’ ny avo Indrindra ho an’ Andriamanitra! Ary fiadanana ho etỳ ambonin’ ny tany amin’ ny olona ankasitrahany” (Lioka 2 :10 ;14)
Toa ohatry ny nofinofy io Tenin’ny anjely tamin’ny 2000 taona lasa io, ny fifaliana sy fiadanana. Misy fanomezana lehibe, goavana no nomen’andriamanitra niaraka tamin’i Jesosy :
Mizara roa lehibe io fanomezana io
1-Fifaliana ho an’ny olona rehetra na mpivavaka na tsy mpivavaka
Fanomezana io, ahoana no tena ahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra moma an’izany fifaliana nomeny izany, fifaliana maharitra, fifaliana mitoetra fa tsy mandalo.
Ny zavatra tena tian’Andriamanitra omena anao dia ny fifalian’ny lanitra, fifaliana Masina, Madio , tsy fifaliana mifangaroharo amin’ny fahalotoana, tsy fifaliana nohon’ny sakafo fotsiny izany, matetika rehefa manao fety tsisy sakafo dia tsisy fifaliana. Tsy fifalian’ny nofo, fa fifalian’ny lanitra mitoetra ao anaty ao, amin’izay rehetra ataonao dia misy fifaliana ao aminao.
2- fiadanana ho an ‘izay olona ankasitrahany.
Ny faharoa dia ny fiadanana, tsy ny olona rehetra no mahazo fiadanana fa izay olona ankasitrahany, izy ireo ihany no mahazo fiadanana. Ankasitrahan’Andriamanitra ve hianao io ? rehefa tonga ankasitrahan’Andriamanitra hianao dia omen’Andriamanitra ilay tena fiadanana amin’izay . Io no fanalahidin’ny fiadanana, ny olona ankasitrahany.
Ahoana no hahatonga anao ho olona ankasitrahan’Andriamanitra ?
Mila miaina eo ambany fitarihan’ny Tenin’Andriamanitra isika amin’izao vaninandro iainantsika izao.
“Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika; ary aoka izy hanjaka amin’ ny hazandrano ao amin’ ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ ny tany.” (Genesisy 1 :26)
Noforonin’Andriamanitra isika hanam-piadanana, tsy noforonin’Andriamanitra isika ho ory lava, noforonin’Andriamanitra isika tena hivelona ao anatin’ny fiainam-pifaliana.
Olon’ny fanahy, olona ara-panahy, io fanahy io no ahafahantsika miresaka amin’Andriamanitra, olona tsy misy elanelana aminy fa olona afaka hihaino sy hankato izay ambaran’Andriamanitra.
Ny dingan’ny fibebahana no tena hahatonga anao ho olona ankasitrahan’Andriamanitra, mila miditra ao anatinao Jesosy Kristy ilay ankasitrahan’Andriamanitra, izay hianao vao tonga ankasitrahana, Jesosy ilay mitondra fiadanana. Ka raha tsy miaina miaraka amin’I Jesosy hianao dia tsy ho ankasitrahana.
Tsy hianao intsony no mandeha irery, fa Jesosy no miara-dia aminao isanandro, tsy maintsy mitafy an’i Jesosy hianao. Tsy afaka hisedra irery izao fiainana izao hianao.
Ahoana no fomba hitahirizana ny fifaliana haharitra ?
Ilay fanomezana sarobidy, ilay fahasoavan’Andriamanitra dia i Jesosy Kristy izay tsy miova, tsy miova ny heriny, izy no mitondra ilay fifaliana maharitra eo amin’ny fiainanao. Tsy zavatra mandalo, tsy fifaliana mandalo, tsy resaka ara-nofo, fa zava-panahy, maharitra.
Mila fanapahan-kevitra matotra, misy zavatra tsy maintsy ialana. Mila mitoetra tsara ao amin’ny fiadanana, fa tsy eny an-dalana eny miovaova, tsy maintsy misafidy. Mila manao jery todika ny lasanao hianao, ny Tompo tsy azonao anafenana.
Raha tsy mbola mitombona tsara ny fiadanana ao anatinao, raha tsy mitombona tsara ny fifaliana ao anatinao dia mila mijery tena hianao, tena efa navelanao hanjakan’I Jesosy tanteraka ve ny fiainanao?
Zavatra telo no mila tsaroantsika:
- Ny Tenin’Andriamanitra
- Mila manapan-kevitra hianao, manajanona izay tsy sitrapon’Andriamanitra
- Ny Fanahy Masina.
Avelao tanteraka izay zavatra fantatrao manelingelina anao amin'ny fanarahana ny Tompo, izay zavatra tsy foinao hatramin'izay nefa tsapanao fa tsy ankasitrahan'ny Tompo, ovay ny làlanao, ny foto-pisainanao, io fitondran-tenanao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra io.
Dia avelao Jesosy hiditra eo amin'ny fiainanao, avelao Izy hanjaka tanteraka eo amin'ny fiainanao, aza matahotra hiala amin'ny ratsy fa manapaha hevitra ary avelao Jesosy hanadio sy hanangana anao indray.
Copyright © 2019 Mitombo ao amin'i Kristy Jesosy